By info on October 6, 2015 in amaphupho nezincazelo, ngenja
Uma uphupha ubona inja, kuwuphawu oluhle ima iziphethe kahle futhi ikulalela, ikakhulukazi uma kuwumdlwane. Uma inja ingaziphethe kahle, ilwa noma iphula izinto, kusho ukuthi uzoba nenkinga empilweni yakho kungekudala, ikakhulukazi ivela kubantu abangathembekile. Uma inja ikuluma, kukhona okuzingelayo okungenzeka ukukhafulele ngisho nangomoya omubi. Uma ikhonkotha noma iklewula, kusho izikhathi zezinkinga emndenini wakho. Uma uphupha umakoti omusha osandukufika emzini izinja zinobungane kuye esikhundleni sokuzama ukumluma, kusho ukuthi wamukelwe ngamadlozi.
3 Responses to Amaphupho ngenja
happiness October 7, 2015 at 1:19 pm #
Thokoza gogo .. Ngicela usizo ngaleli iphupho.. Ngiphuphe ngibona injuzi zifuna ukukuthatha then ngabaleka ma ngibheka la engibalekela khona ngabona sezinengi . Ngathatha imali R2 on my handbag ngayibeka phezu kwetshe ngakhuluma nazo ngith am not ready yet ukth bangithathe ngisafuna ukulungisa ezinye izinto. Ngithe ma ngiqeda imali kunye lenjuzi kwanyamalala lam ngaphaphama … Ngingajabulela ingcazelo
Nomusa January 29, 2016 at 8:42 am #
Nami ngiziphuphile izinja zingiluma ngabeleka ngaze ngandiza nazo zagxuma emoyeni zinami shaqa. Ngabe kusho ukthini lokho?
Fortune October 11, 2017 at 11:30 am #
Ngiphuphe ngibona inja imunyisa imidlwane asengakaboni